gepostet in Allgemein, Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော | No Comments »
စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူသင်၏ကိုယ်ပိုင်လေးမြို့ရိုးသည်ဖြစ်စေ, အခွင့်အလမ်းများကိုပွါးများ. အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်အတူ, တပ်ဆင်ထားတဲ့ဖြီးနဲ့ဆေးသုတ်, မြို့ရိုးမရှိ, နေရာအပိုင်းအခြားတို့ကိုသိတော်မူ၏စိတ်ကူးများပန်းချီနေကြတယ်. Farbliche Schwerpunkte setzen Diese Methode ist mittlerweile sehr beliebt: အခန်းတခန်းသုံးခုရိုးကိုစဉ်အတွင်းကအရမ်းတောက်တောက်အဖြူခြယ်သို့မဟုတ်နေကြတယ်, erhält die vierte Wand eine dunkle […]
gepostet in ဝါဂွမ်းနောက်ခံပုံများ, Redecorate, Tapezieren | 1 Comment »
သင်လည်းသင်သိရ? ကြောင်သင်၏မြို့ရိုးသည်များ၏ wallpaper ကိုခြစ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ကြီးမြတ်ရှာတွေ့. သင်ရုံပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြ, ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့, နောက်ပိုင်းတွင်အိမ်ပြန်ရက်အနည်းငယ်လာကြည့်အသစ်ကိုထပ်နောက်ခံပုံများ၌သင်တို့၏ကြောင်လေးကနေကုတ်ခြစ်. Mit herkömmlicher Tapete ist dies äußerst ärgerlich und die nächste Renovierung deutet sich […]